Internal Memory 8 GB ရှိတဲ့ LG G128 ThinQ ရဲ့စျေးနှုန်းကိုစစ်ထုတ်ခဲ့တယ် Androidsis
သူမျှော်လင့်ရသည် LG က G8 ThinQ ယခုလနှောင်းပိုင်းတွင် MWC 2019. တွင်စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ အထင်ကရဖုန်းသည်ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ကတ်တလောက်မှအကောင်းဆုံးနည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူလာလိမ့်မည်။
ဤအဖြစ်အပျက်တွင်သူနှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကိုသိပြီးဖြစ်သည် - ယခင်ပေါက်ကြားမှုများကြောင့် ကနေဒါ၌မိုဘိုင်းစျေးနှုန်းပေါက်ကြားခဲ့သည် နှင့်အခြားနိုင်ငံများအတွက်အကြမ်းဖျင်းခန့်မှန်းချက်ပေးသည်။ အဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
စျေးနှုန်းကို Reddit အသုံးပြုသူမှဝဘ်ပေါ်တွင်မျှဝေခဲ့သည်။ ပုံကပြတယ် el LG က G8 ThinQ 128GB ကို C $ 1199.99 (~ $ 902) ဖြင့်ရောင်းချမည်။.
LG G8 ThinQ စျေးနှုန်းပေါက်ကြား
El G7 THINQ ၎င်းကို Bell နှင့် Virgin Mobile မှ CAD 1049.99 (~ $ 790) ဖြင့်ရောင်းချခဲ့သော်လည်း၎င်းတွင် 4GB RAM နှင့် 64GB သိုလှောင်မှုရှိသည်။ LG G8 ThinQ ၏စျေးနှုန်းတက်ခြင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ပရိုဆက်ဆာ၊ RAM6GB နှင့်သိုလှောင်မှု 128 GB ပါ ၀ င်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ 64GB မော်ဒယ်ကိုနည်းနည်းနဲ့ရောင်းသင့်တယ်သိုလှောင်မှုပမာဏပိုကောင်းသည့်ဗားရှင်းရှိနိုင်သည်။
ထုံးစံအတိုင်း, ကြိုတင်စာရင်းသွင်းသူများသည်သူတို့၏ဖုန်းနှင့်အတူအရေးကြီးသောလက်ဆောင်များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ LG G7 ကိုကြိုတင်မှာယူသူများသည် ၄၃ လက်မ LG 4K UHD Smart TV ကိုအခမဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ဒီ model ကို US မှာဒေါ်လာ ၇၅၀ နဲ့ရောင်းချလိုက်တာဖြစ်လို့သိုလှောင်နိုင်စွမ်းပိုရှိတဲ့ LG G43 ThinQ ကဒေါ်လာ ၈၀၀ ဒါမှမဟုတ်အနည်းငယ်ထက်ပိုရောင်းနိုင်ပါတယ်။
LG G8 ThinQ တွင် notched display ပါဝင်သည်, ToF selfie ကင်မရာ၊ နောက်ဘက်ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့်ပိုကြီးသည့်ဘက်ထရီ။ ၎င်းသည်ပရိုဆက်ဆာကိုအသုံးပြုလိမ့်မည် Snapdragon 855 နှင့် run သင့်ပါတယ် အန်းဒရွိုက် Pie ပထမ ဦး ဆုံးအခိုက်အနေဖြင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » LG G8 ThinQ ၏စျေးနှုန်းကို 128 GB Internal Memory ဖြင့်စစ်ထုတ်သည်
သံသယများရှိနေသော်လည်းထိုင်းနိုင်ငံက Huawei ၏ 5G နည်းပညာကိုစမ်းသပ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei P Smart (2019)၊ အာရှကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ခွင့်အကွာအဝေးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်